कुलमान घिसिङलाई पुन: विद्युत प्राधिकरण दोहोर्‍याउने सरकारको तयारी ! आउनु पर्छ भन्नेले सेयर गरौं - Nepali in Australia
January 20, 2021 autherLeaveaComment on कुलमान घिसिङलाई पुन: विद्युत प्राधिकरण दोहोर्‍याउने सरकारको तयारी ! आउनु पर्छ भन्नेले सेयर गरौं
मुलुकलाई उज्यालो दिने व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन्, कुलमान घिसिङ । १८ घण्टाभन्दा बढी लामो समयको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो दिएका कुलमान जति शासकको अप्रिय छन्, त्यत्ति नै जनताको प्रिय र पूज्य छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानको निरन्तरता बहुसंख्यक नेपालीले चाहेका थिए । तर, उनलाई राज्यले दोहो¥याएन र उनको स्थानमा पदपूर्ति पनि गरिएको छैन, जस कारण कुलमानको प्राधिकरण यात्रा अझै सम्भावना रहेको धेरैले झिनो आशा गरेको पाइन्छ।
राष्ट्रपतिका रुपमा ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्नुअघि किन धरधरी रोए बाइडेन ?
कपिलवस्तुबाट काठमाडौं आउँदै गरेको गाडीमा डेढ करोड रुपैयाँ भेटियो